Diyo post :: विभिन्न आकारका सुन्दर र अनौठा ९ वटा तालहरु विभिन्न आकारका सुन्दर र अनौठा ९ वटा तालहरु - Diyo post
विभिन्न आकारका सुन्दर र अनौठा ९ वटा तालहरु
एजेन्सी । प्रकृतिले आनन्द र सुन्दर अस्तित्वको कथा भन्छ । हाम्रै वरिपरि विभिन्न किसिमका राम्रा समानता त भेटिन्छन् तर ति मध्ये केहि धेरै नै आश्चर्यात्मक हुन्छन् । जब प्रकृतिको प्रबृतिले विभिन्न आश्चर्यात्मक आकार दिन्छ । पानी जब यसले विभिन्न आकार कोरेर प्रकृतिको सुन्दरतालाई झनै आकर्षण बनाईदेको हुन्छ । हामी ती आर्कषण हेर्छौ तर देख्दैनौ ।
१.पेटो ताल, क्यानडा : क्यानडियन चट्टानको विचमा रहेको यो ताल हल्का निलो र हरियो रङले चम्किरहन्छ । त्यस क्षेत्रमा ट्रेकिङको लागी गएका पर्यटक विल पेओटेको नामबाट राखिएको हो । यो हिमनदिबाट बनेको ताल हो ।
२. ईरोज ताल , भारत : माया प्रेममा परेको बेला कसैलाई प्राकृतिक उपहार दिनुृ छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरुको लागी उपयुक्त ठाउ हो ईरोज ताल । भारतको चेम्ब्रा चुचुराको फेदमा रहेको यो ताल समुद्रि सतहदेखि १,३९८ मिटर उचाईमा पर्दछ । यस तालको आकार पानको पात जस्तै छ, जसले प्रेमको चिन्हको संकेत गर्दछ ।
३. पानीमा बन्दुक : प्रकृति र मानिसले संगै मिलेर काम गर्यो भने के हुदैन ? यस्तै प्रकृति र मानिसले संगैकाम गरेर बेल्जियममा एउटा हतियार बनाएका छन् । बेल्जियमको हाईवे नजिकैकोे उक्त हतियार सन् १९७० मा बनाईएको हो । बन्दुक आकारको यस तालको लम्बाई २.५ किलोमिटर रहेको छ ।
४. एम सी किङले ताल, अलास्का : एम सी किङले पर्वत नजिकैको टाकुरामा रहेको यो ताल उत्तर अमेरिकाको ६,१९४ मिटरको उचाईमा पर्दछ । नेपालको रारा ताल जस्तै यो ताल पनि एकदमै सुन्दर र आकर्षक छ ।
५. म्यानहन्ट ताल, ब्राजिल : साओ पाउलो राज्य ब्राजिलका मछा मार्ने समुदाय र दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिले विशाल मानिसको आकारमा ताल निर्माण गरेका छन् । यो ताल एउटा व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा निर्माण गरेको बताईन्छ । आश्चर्यात्मक यो ताल लगभग १४० मिटर अग्लो छ ।
६.दुनहुयाङ ताल, चिन : म्रुभुमिको विचमा बनेको यो ताल दुनहुयाङ शहरबाट ६ किलोमिटर टाढा रहेको छ । अविश्वसनिय यो ताल दक्षिण चिनको गोवि मरुभुमिको विचमा पर्दछ । यस तालको अवलोकन गर्न पर्यटक र बौद्ध धर्मावलम्बीहरु त्यहा पुग्ने गर्दछन् । अर्ध चन्द्राकार आकारको यो जादुमयी ताल १९६० मा बनेको हो ।
७. होर्सु ताल, क्यानडा : यो ताल ठुलो नागबेली नदिबाट छुट्टिएर बनेको हो ।
८. मेनीकोगान ताल क्यानडा : क्यानडाको क्युविक क्षेत्रमा अवस्थित यो आर्कषित ताल हो । यो ताललाई जोडिएको औठी भनेर पनि चिनिन्छ । गोलोआकारको यस तालको विचमा चट्टान रहेको छ । हिमनदिबाट बनेको यस तालले १,९४२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
९. फिस ईटिङ के्रक, अमेरिका : जिगज्याग आकारको यो ताल अमेरिकाको फ्लोरिडामा पर्दछ । नदिको पानीले यस तालको आकार बाङ्गोटिङ्गो बनाईदिएको छ । एकदमै ठुलो आकारको यो ताल जलस्रोत उत्पादको लागी उच्च मानिन्छ ।
[ एजेन्सीको सहयोगमा ]